Will Yangu Fitbit Track Cycling - BikeHike
Fitbit yakanaka yekuchovha bhasikoro here?
Ini ndinowedzera sei bhasikoro kuFitbit yangu?
Ndeapi mabhasikoro mapurogiramu anoshanda neFitbit?
Fitbit inoteedzera sei bhasikoro rekunze?
Fitbit Charge 4 inoteedzera otomatiki bhasikoro here?
Ini ndinoteedzera sei bhasikoro pane yangu Fitbit Charge 3?
Ndingaronda sei bhasikoro rangu?
Sei Fitbit isingaverenge bhasikoro sematanho?
Iwe unoteedzera sei mileage pane spin bhasikoro?
Fitbit inopindirana ne peloton?
Fitbit anoziva sei kuti uri kuchovha bhasikoro?
Fitbit 4 inogona kushandiswa kubhasikoro?
Ini ndinowedzera sei bhasikoro kune yangu Fitbit Charge 4?
Ini ndinoronda sei bhasikoro rangu rakamira pane yangu Fitbit Charge 4?
Fitbit Charge 3 inoziva bhasikoro here?
Ini ndinomisa sei bhasikoro pane yangu Fitbit Charge 3?
Kuchovha bhasikoro kwakafanana nekufamba here?
Ndingatevedzera sei bhasikoro rangu pafoni yangu?
Ndeipi yakanakisa GPS tracker yebhasikoro?
Mabhasikoro ane matracker here?
Hongu, Fitbits inogona kuronda kuchovha bhasikoro rako uchishandisa tekinoroji inonzi SmartTrack uye inobatsira zvikuru kune vanochovha mabhasikoro munzira dzakawanda. Chimwe chakasiyana chezvizhinji zvigadzirwa zveFitbit, izvo zvakaratidza kuti zvakakosha pakuchovha bhasikoro, kubatanidzwa kweGPS uye kushanda.
Fitbit Charge 4: Yakanyanya kusimba tracker yekuchovha Izvi zvinoreva kuti unogona kusiya foni yako kumba kana iwe uchida kutora Chaji yekuchovha bhasikoro. Zvakare neyakajairwa kurova kwemoyo data, iyo Charge 4 zvakare ndiyo yekutanga kuratidzwa kweiyo nyowani yekusimba metric yeFitbit - Active Zone Minutes.
PaFitbit app dashboard tinya iyo Exercise tile kuti uvhure nhoroondo yako yekurovedza muviri. Iyi ndiyo tile inoti "Track exercise" kana usati washanda nhasi. Tinya chiratidzo chekumira mukona yekurudyi. Tinya Log. Tokonya chiitiko chazvino kana tsvaga rudzi rwekusimbisa muviri. Gadzirisa maitirwo ezviitwa wobaya Wedzera.
Mapurogiramu gumi epamusoro eKuwana Zvakanyanya Kubva pane Yako Fitbit Strava. Strava inonyatso kuwirirana neakawanda GPS yakavakirwa maturusi, asi zvakare yakasimba app yeakasimba trackers zvakare. Mepu My Run. My Fitness Pal. Fitstar Personal Mudzidzisi. Thermo's Hydration App. Yakarasika! Tsvaga Fitbit Yangu. Fitabase.
Chokwadi kuFitbit Surge, bhasikoro-yekutevera leverages GPS uye mamwe ma sensors epamusoro pane mudziyo kubvumira vatasvi kuona kureba, nguva, avhareji yekumhanya, kurova kwemoyo, macalorie akapiswa uye nguva; zviverengero zvinongowiriranisa zvisina waya kuFitbit app dashboard kuti uongorore nzira, kumhanya uye kukwidziridzwa mune zvakadzama.
Nekutadza mitambo inoteverwa neCharge 4 inosanganisira kumhanya (GPS), kuchovha bhasikoro (GPS), kushambira, kutsika, kurovedzera kunze (GPS) uye kufamba (GPS). Imhaka yekuti Charge 4 inogona kungobata mapfupi mapfupi kune ma Workout modes pachishandiso pachacho.
Ndine Charge 3, uye nzira yaunosvika nayo Bhasikoro ndeiyi: Vhura iyo app uye tora avatar yako (kumusoro kuruboshwe; inogona kunge iri chiso chako) Izvi zvinokuendesa kune account yako peji; tsvaga mudziyo wako pazasi (Charge 3) uye tinya pairi. Apa ndipo paunogona, semuenzaniso, kutora zviso zvewachi; skira pasi kuenda ku Exercise Shortcuts; tora pairi.
Bike GPS tracker inogona kushandiswa kune chero mavhiri maviri akadai se scooty / scooter etc. Pfungwa yakakosha yeLettrack mota yekutevera system ndeyekuvimbisa kuchengetedzwa kwevatengi vayo. Iyo GPS yekutevera app yebhasikoro inofanirwa kuisirwa nemunhu anoteera nekutarisa nzvimbo yemunhu ane hanya.
Nehurombo, Apple Watch, Fitbit, uye mamwe mamonitor echiitiko haatore matanho anoenderana ekuchovha bhasikoro. Izvi zvinodaro nekuti mamonitor ekuita akadai seApple Watch, Fitbit, Garmin, uye Xiaomi Mi Band kuverenga matanho anoenderana nekufamba kwemaoko. Ruoko rwako rwunonyanya kumira paunenge uchichovha bhasikoro.
Kuti uone kuchovha bhasikoro pamudziyo wako, enda ku "Exercise" uye wosarudza "Spinning". Wobva wadzvanya kwenguva pfupi chidimbu kuti utange uye tinya pairi kana wapedza. FitBit inorekodha data rese rine chekuita nemoyo wako, kumhanya, macalorie akapiswa, uye nguva.
Iye zvino unogona kugovera metrics kubva kuPeloton inotasva otomatiki kune yako Fitbit account pese paunopedza kuchovha. Batanidza ako Peloton uye Fitbit maakaundi kuti uone Peloton metrics senge kureba kwekurovedza muviri, chinhambwe chafambwa uye macalorie akapiswa muFitbit dhibhodhi yako.
Fitbit inoshandisa data rako rekuita uye Basal Metabolic Rate (BMR) yakabatana kufungidzira macalorie ako akapiswa panguva yechikamu. Iko kugona kuyera kusimba kwekushanda kwako uye maitiro nekutarisa kurova kwemoyo wako kwakakosha kune vazhinji vanochovha mabhasikoro.
Iyo Fitbit Charge 4 iwachi yekurovedza muviri kune chero munhu anozviti 'anoshanda', kwete vatyairi vebhasikoro chete.
Pafoni yako app: Tinya pamufananidzo wako, wobva wachaja yako 4. Skroka pasi kuenda ku Exercise Shortcuts. Tinya pakarongedza kumusoro kurudyi uye bvisa nzira yekudimbudzira yausingade. Zvino iyo + Exercise Shortcut inoshanduka kuva bhuruu. Tinya pa + Exercise shortcut uye wedzera elliptical.
Kuti utarise ako emukati mabhasikoro masesisheni paFitbit yako, ingoenda kunorovedzera muviri uye wobva watsvaira pamwe nezviitwa kusvika wasvika pakutenderera. Zvese iwe zvaunofanirwa kuita kudzvanya pairi kuti utange kurekodha uye tinya pairi zvakare kuti uimise kana wapedza. Zviri nyore!Chikunguru 4, 2021.
Iyo Fitbit Charge 3 yakanakira kuchovha uye nezvimwe zvakawanda. Iine akavakirwa-mukati maekisesaizi modhi, SmartTrack kurovedza muviri kuona, uye moyo yekutarisa, iyo Fitbit Charge 3 ndiyo yakakwana yekusimba tracker shamwari yekuchovha bhasikoro, ingave iri munzira kana mukirasi yekutenderera.
Aya ndiwo maitiro: Vhura iyo Fitbit app. Tinya pane icon iri kumusoro kurudyi kuti uwane yako account marongero. Tinya paCharge 3 mune runyorwa rwemidziyo. Skira pasi ku "Exercise Shortcuts" uye tora iyo.
Kuchovha bhasikoro kunoshanda zvakanyanya pane kufamba, saka ungangoshanda nesimba nekufamba nekukurumidza uye pamwe kurovedza moyo wako, mapapu uye mhasuru huru zvakanyanya. Kune rimwe divi, kuchovha bhasikoro pamwe kunenge kushoma pahudyu, mabvi uye zviziso zvetsoka pane kufamba.
Wana zviverengero zvenguva chaiyo Pafoni yako, vhura Google Fit app. Tinya Wedzera Track Workout. Kuti usarudze chiitiko chawave kuda kutanga, baya pakanzi Down arrow . Tinya Start Workout. Kana uri kuchovha bhasikoro, takura foni yako muhomwe. Kutevera kuchave kwakaringana kupfuura kana foni yako yakakwidzwa kana mubhegi.
Yakanakisa gps tracker yemota nemabhasikoro muIndia Onelap Micro - Yakavanzika Mvura Isingapindi GPS Tracker. Autowiz Obd Gps Car Tracker. USGlobalSat USB GPS Receiver. Acumen Tracker UC 900 GPS Tracker. Lamrod Supreme Google Link GT02A GPS Tracker. Akari Gt02A GPS Tracker Device. Zaicus ST-901 Mvura Yakavakirwa-mukati Battery GSM GPS Tracker.
Kune akasiyana marudzi eGPS trackers anowanikwa pamusika anokubatsira kuti utarise nzvimbo yebhasikoro rako. Vamwe vanopa masevhisi eGPS vanopawo yakawedzera sarudzo dzekufambisa uye kukurumidza kuteedzera nzvimbo chaiyo-nguva iyo inobatsira zvakanyanya kana bhasikoro rako rikabiwa kana kurasika.
Ko Fitbit Charge Track Cycling
Mubvunzo: Inogona Fitbit Charge 3 Track Cycling
Ko Fitbit Charge 3 Track Cycling
Mubvunzo: Inogona Yangu Fitbit Charge 2 Track Cycling
Ko Fitbit Yangu Inochaja Hr Track Cycling
Inogona Iyo Fitbit Charge 2 Track Cycling
Ko Fitbit Track Cycling
Unogona Kutevedzera Kuchovha PaFitbit Charge 2
Maitiro ekutevera Kuchovha PaFitbit Charge 2
Mhinduro Yekukurumidza: Fitbit Charge Track Bicycle Riding
Inogona Fitbit Charge Track Bike Riding
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Fitbit Charge Track Stationary Bike
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Fitbit Inpire Track Cycling